अवैध सम्बन्धले भित्र्याएकाे डरलाग्दाे विकृति - NA MediaNA Mediaअवैध सम्बन्धले भित्र्याएकाे डरलाग्दाे विकृति - NA Media
हत्या, हिंसा यसलाई राेक्न सकिने कुनै उपाय छैन ?
हाम्रो समाजमा अवैध सम्बन्धले दिनदिनै जरा गाडिरहेको छ। यसलाई राेक्ने वा कम गर्दै जाने कुनै उपाय छैन ? अनि यति धेरै अवैध सम्बन्ध बढ्नुमा काे बढि जिम्मेवार छ ? श्रीमान – श्रीमती, समाज, उच्च महत्वाकांक्षा या याैन ?
भलै विभिन्न कारण हाेला तर गहिरिएर साेच्दा चाहिँ याे पाटाे दिनदिनै विकराल बन्दैछ । घर, परिवार, समाज कसैलाई पनि ढुक्कले विश्वास गर्न नै नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। के यस्ता अवैध सम्बन्धले सन्तुष्टि देला त ? केही क्षणकाे आवेशले घरपरिवार र समाजले हेर्ने दृृृष्टिकोण फरक हुन्छ। किन साेच्दैनन् ? किन बुझ्दैनन् र बुझाउॅदैनन् पनि किन हाेला ? कि अवैध सम्बन्ध राखेर रमाउनेहरूले जीवन र जगतकाे अलिकति पनि हेक्का राख्नुपर्दैन ? साेचनीय कुरा छ ! उनिहरूकाे आवेश र आवेगले गर्दा घरपरिवार बालबच्चा भएकाहरूलाई मानसिक तनाव कति हुॅदाे हाे ? एकपटक साेचाैॅ त त्यहि पनि हामी हिन्दु संस्कारमा हुर्केका बढेकाहरू त अलिकति धर्मकर्ममा पनि विश्वास राख्छाै ।
हिन्दु धर्मले त यस्ता कुराहरू बन्चित नै गरेकाे छ । तर पनि मान्छेहरू आखिर के काे लागि यस्तो मरिहत्य गर्छ्न् । यो चासाेकाे विषय पनि हाे ! किन ? साेच्दैनन् कि परिवार घरबाट खुशी मिल्छ भनेर आखिर लुकाएर राखेकाे सम्बन्धले एकदिन पर्दा फास गरेरै छाड्छ धेरै उदाहरणहरू छन हाम्रो समाजमा याे साेचनीय कुरा छ । यति थाहा हुॅदाहुॅदै पनि किन यस्ता विकृतिहरू भित्रीन्छ समाजमा यसलाई निर्मुल बनाउन प्रेरित गर्न सकिने कुनै उपाय छैन ? किन सकारात्मक साेच राख्दैनन् यी समाजमा भएका अबैध सम्बन्ध राख्नेहरूले, कसरी फॅस्छन कसरी फॅसाईन्छ ? आजकल त झन फॅस्ने फॅसाउने दुवैलाई थाहा छ, परिवार छ, बालबच्चा छन् तर पनि लुकिछिपि अबैध सम्बन्ध राख्छन् ।
याैन असन्तुष्टि अनि विलासितामा जीवन विताउनलाई आर्थिक रकम संकलन कस्ताे विडम्बना छ ! मिलेसम्म लुटपाट गर्ने अनि पछि फेरि हिंसा भन्ने, हुॅदासम्म लुटाउने अनि सकिए पछि लुटिए भनेर आफ्नै परिवासॅग गुनासाे जे जे पनि त्यहि अपहेलना र बेवास्था गरिएकाे परिवारले नै पुन: ब्यहाेर्नु पर्ने यस्ता उदाहरणहरू अहिले समाजमा डरलाग्दाे भाईरस भईरहेकाे छ ।
केटा मान्छेलाई झन दाेहाेराे भार आर्थिक त छॅदैछ । अनि भावनाकाे लगानी गर्छ्न्, भावनामा नै बहकिन्छन्, रकम कलम भएकाे ईज्जत् हरण सकिन्छ, उस्तै परे त ज्यान नै खतरामा हुने देखिन्छ । तर पनि साेच्दैनन्, महिला भए त अलिकति अवैध सम्बन्धलाई घरपरिवारमा गाेप्य राखे मात्र पनि पुग्ने देखिन्छ अहिलेकाे स्थितिमा तर गाेप्यता कहिले सम्म त ? नराम्रो सम्बन्धकाे परिणाम नराम्रो नै हुने हुॅदा सॅधै गाेप्य रहॅदैन, थाेरैले यस्ता सम्बन्ध ब्यहाेर्दा रहेछन् धेरै सम्बन्ध सक्ने शिलशिलामा हत्या नै गरेका घटनाहरू दिनदिनै बाहिरिएका छन् । तर पनि सुधार हुने स्थिति देखिॅदैन, कति अबैध सम्बन्ध त घर परिवारलाई थाहा छ । आफ्न्तकाे साईनाे लगाउॅछन् आउने जाने सबै देखिन्छ तर पनि तिनिहरू अबैध सम्बन्ध राख्छन् विश्वास गर्न नै गाह्राे सम्बन्ध प्रगाढ देखिन्छ, तर भित्री रहस्य र पीडा कति कति त्याे त भाेग्ने मान्छेकाे मन मात्र साक्षि हुॅदाे हो । कस्ताे विडम्बना ?
किन यसरी समाजका मान्छेहरू बरालिन्छन सम्पन्नता भएपछि आफ्ना विगत र सुख दु:खमा साथ दिएका परिवार भुल्ने गलत बाटाेमा लाग्छन् त एक छिन गम्भीर भएर साेच्न मन लाग्छ । हुन त मान्छेहरू बिग्रनुमा बढि चाहिँ अनावश्यक कमाई पनि हाे कि ? भन्छन् नी मान्छेलाई पैसाले त गलत प्रयाेग भयाे भने त बद्नाम नै गरिदिॅदाे रहेछ । सम्पन्नता भित्र विपन्न भएका मान्छेहरूसॅग बाॅडेर खाने भन्दा पनि नराम्रो काममा नै गलत प्रयाेग गरेकाे देखिन्छ समाजमा तर विपन्नमा जहिले पनि बच्ने र बचाउने साेच आउॅदाे रहेछ । कति उदाहरण छन् हाम्रो समाजमा त्यसैले अवैध सम्बन्धले क्षणिक आनन्द त देला तर आत्मा सन्तुष्टि कहिल्यै दिॅदैन र परिणाम पनि नराम्रो नै आउॅदाे रहेछ । यति सम्म कि हत्या, हिंसा नै भईरहेका छन्, हुन त कतिकाे बाध्यता पनि हाेलान् तर थाेरै बाध्यता हाेलान् त कतै भावनामा बहकिएर पनि अबैध सम्बन्ध राखेका हुन् कि, गम्भीरता पुर्वक साेच्न जरूरी छ ।
तर धेरै चाहिँ अहमता र महत्वाकांक्षा नै भन्छु म, सम्पन्नता काे लगानी पनि हेरेर बुझेर गराै । यदि सम्पन्नता लगानी गलत ठाउँमा पर्यो भने जीवनको केही समय आर्थिक रुपले तनावमय हुन्छ । यदि भावनामा बगेर अवैध सम्बन्ध राख्दै गरेकाे लगानीले मान्छेलाई हाेस आए पछि जीन्दगीभर भावनात्मक पीडा भोग्नु पर्छ । समयसंगै पैसाको मात्र होइन भावनाको पनि सेयर बजार घटेको छ चेतना भया, र जथाभावी भावनाको लगानी नगरेकै राम्रो ।
सचेत रहाै ! आफु सहि हुँदै सहि सम्बन्ध र सहि काममा लागाै। घर परिवार समाज सबैकाे अगाडि सकेसम्म सम्मानित जीवन जिउने काेसिस गराै ।।